Hermetisma - Wikipedia
Ny hermetisma na hermetisisma dia teny ampiasaina hanondroana rafitra filôzôfika izay mifototra indrindra amin' ny fampianaran' i Hermesy Trismegistôsy (izay fitambaran' ny andriamanitra grika Hermesy sy ny andriamanitra ejipsianina Tôty, araka ny fedrà ). Ireo fampianarana ireo dia voarakitra ao amin' ny asasoratra isan-karazany nomena an' i Hermesy (atao hoe Hermetica), izay novokarina nandritra ny vanim-potoana naharitra taonjato maro (300 tal. J.K. – 1200 tal.J.K.), ary mety ho samy hafa be ny votoatiny sy ny sehatra.
Ny iray amin' ny fampiasa mahazatra indrindra an' ilay anarana dia ny fanondroana ny rafitra ara-pivavahana sy ara-pilôzôfia natolotry ny vondron' olona manokana amin' ny asasoratra hermetika fantatra amin' ny anarana hoe "Hermetica ara-pilôzôfia", ny malaza indrindra amin' izany dia ny Corpus Hermeticum (angon-tsoratra hermetika grika fito ambin' ny folo, nosoratana teo anelanelan' ny taona 100 sy 300 taor. J.K. tany ho any). Ity endrika manokana sy ara-tantaran' ny filôzôfia hermetika ity dia indraindray antsoina hoe hermetisma, mba hanavahana azy amin' ireo filôzôfia voatsilo avy amin' ireo asasoratra hermetika maro tamin' ny vanim-potoana sy fomba samy hafa.
Ny teny misokatra kokoa dia ny hoe hermetisisma, izay mety manondro rafitra filôzôfika isan-karazany avy amin' ny asasoratra hermetika, na amin' ny lohahevitra mifandray amin' i Hermesy fotsiny (indrindra fa ny alsimia, matetika dia mitondra ny anarana hoe "zavakanto hermetika" na "filôzôfia hermetika"). Ny fampiasana malaza indrindra an' io teny io amin' ny heviny mivelatra kokoa dia ao amin' ny fotokevitry ny hermetisman' ny Renaissance, izay manondro ireo filôzôfia môderina tany am-boalohany nalaina avy amin' i Marsilio Ficino (1433-1499) sy ny dikan-tenin' i Lodovico Lazzarelli (1447–1500) momba ny Corpus Hermeticum, andaniny, ary ankilany ny dikan-teny nataon' i Paracelsus (1494-1541) fampidirana ny fitsaboana ara-pilôzôfia vaovao izay nalaina tahaka amin' ny "Hermetica ara-teknika" (izany hoe Hermetica ara-panandroana, araka alsimia, ary ara-mazia, toy ny Tabula Smaragdina).
Tamin' ny taona 1964, i Frances A. Yates dia nandroso tsangan-kevitra fa ny hermetisman' ny Renaissance, na ilay nantsoiny hoe "lova hermetika", dia singa lehibe amin' ny fivoaran' ny siansa môderina. Na dia nolavina tanteraka aza io tsangan-kevitra nataon' i Yates io, ny anjara toerana lehibe sahanin' ny alsimia, izay "siansa hermetika", amin' ny fisainan' ireo olo-malaza toa an' i Jan Baptist van Helmont (1580–1644), i Robert Boyle (1627–1691) na i Isaac Newton (1642–1727) dia azo aseho.
Nandritra ny tantarany, ny hermetisma dia nifandray akaiky tamin' ny hevitra momba ny fahendren-janahary voalohany, izay tsy nambara afa-tsy tamin' ireo olon-kendry tranainy indrindra, toa an' i Hermesy Trismegistôsy. Tamin' ny Renaissance, izany dia nanjary hevitry ny prisca theologia na "teôlôjia tranainy", izay nanamafy fa misy sady tokana ny tena teôlôjia izay nomen' Andriamanitra ny sasany amin' ireo olombelona voalohany, ary ny dian' izy ireo dia mety mbola hita ao amin' ny rafi-pisainana tranainy isan-karazany. Ireo mpandinika toa an' i Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494) dia nihevitra fa io "teôlôjia tranainy" io dia azo amboarina mba hiverina indray amin' ny alalan' ny fandalinana (izay noheverina fa) ireo asasoratra tranainy indrindra mbola misy, toy ireo nosoratan' i Hermesy, sy ireo nosoratan' i Zaratostra (na Zôrôatra), i Orfeôsy, i Pitagôra; i Platôna, ny Kaldeanina, na ny Kabala, ohatra. Tsy ela dia nivoatra ho amin' ny hevitra naroson' i Agostino Steuco (1497–1548) voalohany fa ny fahamarinana iray sy mitovy avy amin-janahary dia mety ho hita ao amin' ny lova ara-pivavahana sy ara-pilôzôfia amin' ny vanim-potoana sy toerana samy hafa, izay samy heverina ho fisehoana samihafan' ny filôzôfia maharitra mandrakizay sy manerana izao rehetra izao. Ao anatin' ity tontolon' ny perenialista ity (filôzôfia mandrakizay), ny teny hoe hermetika dia nanjary nanjavona kokoa ny maha-tokana azy, ary lasa teny filamatra fotsiny ho an' ny fahalalan' andriamanitra tao amin' ny Ejipsianina fahiny, indrindra fa mifandraika amin' ny alsimia sy amin' ny mazia. Na dia eo aza ny fampiasan' izy ireo tsindraindray ireo lahatsoratra sy fotokevitra hermetika tena izy, io fampiasana mahafaobe sy tsy ara-tantara io dia nalaza be tamin' ny ôkoltistan' ny taonjato faha-19 sy faha-20.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermetisma&oldid=1040709"
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 05:59 ity pejy ity.